Affaire Andry Rajoelina, Alohalika ny ranom-bary | GAZETY_ADALADALA
Affaire Andry Rajoelina, Alohalika ny ranom-bary
Posted on 25/01/2009 by gazetyavylavitra
Nisy ny antso avo nataon’ny mpomba an’i Andry Rajoelina mba ho fiarovana ny ’emetteur’ eny Ambohimitsimbina, satria heno fa misy ny miaramila misaron-tava nalefa hanala an-keriny izany fitaovana izany.
Efa mandeha any koa, hono, ny didy fampisamborana an’i Andry Rajoelina.
An’arivony ankehitriny ny vahoaka tonga, na eny Ambodivona (tapaka mihitsy ny làlana), na ny eny amin’ny trano fonenan’ny Ben’ny tanàna mba hiaro ny ankohonany, na ny teny Ambohimitsimbina.
Voatosik’ireo vahoaka teny Ambohimitsimbina ireo miaramila nandeha an-tongotra saika ho eny. Nosoloina an’ireo mandeha camion indray izany (ho hita eo ny tohiny).
Hiverina tampoka eto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana, ary dia nisy ni fampiantsoana ny vahoaka hitsena azy eny Ivato, ka hanao akanjo fotsy (loharanom-baovao:fampielezam-peo VIVA, Lalatiana Rakotondrazafy sy Rolly Mercia, Club de la presse). Toa nisy mihitsy aza hono ny fanapahana toriteny tany am-piangonana mba hilazana izay tokony hitsenana ny filohan’ny FJKM izay. (Tsy kentrina akory ny olona)
Niantso ny mpomba ny demokrasia hampiseho ny heriny Andriamatoa Marc Ravalomanana, ary dia nasehony tokoa izany omaly, setriny kosa dia nalefany ny tafika, ho toy ny herim-pamoretana hamono ny afo.
Misy ankehitriny ny filazana ireo secret rehetra momba izao fanjakana izao: vaoto soa emeraude tany Hong Kong, 356 kg vao naika hamidin’ny tompony tany ivelany ka nalain’ny fanjakana ary nampidirana ny tompony any am-ponja (hoy Rolly Mercia). Milaza ny hamoaka izany isaky ny adin’ny iray i Rolly Mercia raha ilain’ny fanjakana ny hamoahana ny tsiambaratelony rehetra, mba ho fantatr’ireo miaramila manaiky hanefa ny baikon’ity olona ity, handatsa-drà ny Malagasy mpiray tanindrazana. Hitsara antsika eto ny tanatara, hoy hatrany izy ao amin’ny onjam-peo VIVA. Fanontaniana napetrany amin’ny miaramila ny hoe : sahinareo ve ny handatsa-dra ireo vahoaka ireo?
Efa miala any koa ny andia-miaramila ho ety Ambodivona raha ny feo nalefa tao amin’ny VIVA Radio (loharano:Lalatiana Rakotondrazafy)
Mampahatsiahy ny tamin’ny andron’ny RESEP sy ny FRS , hoy Lalatiana, ity tantara miainga any ity. Tadidionareo, hoy hatrany izy, ny nahazo ireny olona ireny sy ny fianakaviany, satria eny anivon’ny fiaraha-monina foana ihany ianareo.
Rolly Mercia: Misy hono ny fizarana vola Ar2000 ho fanambazana an’ireo olona mba handeha hitsena an’Andriamatoa Marc Ravalomanana.. Feno sainam-pirenena natsangana manamorona ny lalana eny Talatamaty sy Ambohibao, ho fanehhoana aminy fa hoe mbola misy ny olona momba sy tia azy (Tsy mbola famitahana azy filoha ve izany?). Misy koa ny Bus lehibe nalefa hitatitra olona amin’izay fitsenana izay. Noterena koa ny mpiasa rehetra ao amin’ny Antenimieran-doholona ao mba tsy maintsy ho tonga any am-piasana androany amin’ny 12 ora.
2000: niteny Andriamatoa Marc Ravalomanana, fa raha misy olona na dia 200 aza midina eo amin’ny 13 mai mangataka ny hialany, dia hiala izy (mbola hitazona izay teny nomeny izay ve izy?), hoy i Lalatiana Rakotondrazafy. Niantso ny olona koa moa izy ho an’ireo izay mahalala ireo hery nalefa hamoritra vahoaka ireo mba hitadidiy ny anaran’izy ireny.
Mihiaka hatramin’ny hoe ‘na hisy faty olona aza, tsy misy hiala eto Ambodivona’, ireo vahoaka tonga manao andrimaso.
MBS, Radio Fahazavana, Radio MAda (izany hoe ny Groupe MBS): tsy misy afa-tsy fanaratsiana an’ingahy Ben’ny tanàna no mandeha ao amin’izao fotoana izao.
Antsoina koa ny Fonksionera rehetra (ombam-bady aman-janaka) hitsena ny filoha androany Alahady, raha tsy izany dia hisy ‘sanction’ hirotsaka ho an’izay mandà.
VIVA: Misy Minibus Gris nivoaka tao Fiadanana mitondra miaramila misaron-tava hamonjy ny eny Ambodivona hanakatona azy sy hisambotra iray miteny ao , miaraka amin’ny Ben’ny tanàna.
Nisy Gendarme GP2 avy ao amin’ny Renseignement Fiadanana tratran’ny andrimasompokonolona teo ampampitàna vaovao ho an’ny lehibeny momba ny lalana tokony haleha raha te-hanafika an’Ambohimitsimbina. Izany Doudou izany no fiantso azy.
Nasaina nampaneno lakolosy ny fiangonana sasany mba hanentanana ny vahoaka hitsena an’Andriamatoa Marc Ravalomanana.
Teo aloha tokoa dia nisy ny zavatra azon’ingahy Marc R. rehefa avy any ivelany tany, fa tsy nisy ny fitsenana makotroka toy izao, fa tamin’ity indray mitoraka ity angamba nahazo zava-tsoa be tokoa izy matoa anafarana olona hatrany Arivonimamo. Nisy ny fizarana hena sns…
Nanao hetsika koa ny tany Toliary sy Antsiranana mba ho firaisany sy fiarahany mitempo amin’Antananarivo amin’izao fitakiana izao.
Nakatona ny Radio Feon’Imania taorian’ny nandefasany mivantana ny tenin’i Ben’ny tananan’Antananarivo.
Manasa anareo ihany koa hitsidika ny site Madagate fa misy vaovao azontsika ifampizarana sy ifampitana ihany koa ao. Isaorana etoana ny namana J. Ramambazafy amin’ny lahatsorany ao.
Re siosio koa ankehitriny fa misy ny manamboninahitra tsy mankasitraka ny fitondrana, ary efa mifampitsikilo izy samy izy hoe iza no tena manome ireny baiko ireny. Misy koa, hono, minisitra efa mitady ny varavarana hivoahana amin’izao fotoana izao.
Fa ny zavatra mahalasa ny saina koa dia ity, tamin’ny roa no voalaza fa hipetrahan’ny fiaramanidina mitondra an’Andriamatoa Marc Ravalomanana, nefa dia tamin’ny efatra vao nipetraka. Fa naninona? Asa lahy!!!!
Dia samy miandry izay kabariny izany isika rehetra.
Dia nikabary tokoa ny lehilahy ary nilaza fa ‘vita izay ny sangisangy’, ‘tsy maintsy handray fepetra ny fanjakana’. Fa angaha tokoa moa sangisangy no nandraisany sy ireo manodidina azy izay nataon’ny olona hatrizay?
« Place de la démocratie 24 janvier 2009 Taorian’ny fahatongavan’ingahy Ravalomanana »
Liam-baovao, on 25/01/2009 at 4:33 said:
Misaotra amin’ny fampitam-baovao aty @ faritra